Doorashada Somaliland..Qof Iyo Seddex Cod! | Xaqiiqonews
Doorashada Somaliland..Qof Iyo Seddex Cod!
Somaliland ayaa isku diyaarineysa in ay qabato doorashooyinka, wakiilada taasi oo ay xigi doonaan doorashada madaxweynaha, hase ahaatee waxa ay su’aal ka taagan tahay daahfurnaanta doorashada.
Tan iyo markii asaasay Somaliland, waxaa la tilmaamaa in waxqabadka ugu weyn ee gaareen ay tahay in dadka rer Somaliland ay helaan fursad ay codkooda ku siin karaan qofkii ay doonaan.
Doorashada lagu wado in ay bilaabato dhawaan, ayaa wajaheysa seddex nooc oo cabqad ah kuwaasi oo u kala ah :caqabadda qabiilka, caqabadda masuqmaasuqa iyo caqabadda khilaafka.
Guddoomiyaha Jaamacadda Hargeysa oo u waramayey barnaamij “dood ah” oo ka baxay tilifishinka Horncable ayaa sheegay in Somaliland ay dib u dhigtay caqabadda “reeraha iyo qabiilka” oo sida uu sheegay barfasoorka saameysay dhinac kasta, sida dhaqaalaha, doorashooyinka iyo maxkamadaha Somaliland.
Sidoo Kale Aqri: Waa Tan Sirta Somaliland Ee Aysan Jirin Qof Ku dhiiran Kara Sheekisteeda
Dhinaca kale, waxaa baraha bulshada lagu baahiyey sawirada kaarar seddex ah oo sida la sheegay uu qaatay hal qof, taasi oo ka dhigan qofkaasi in uu awood u yeessho codeynta seddex mar oo kala duwan, taasi oo tilmaam cad ka bixineysa heerka musuqa uu gaaray Somaliland.
Gebiley qofka joogaa 3 jeer ayuu codayn karaa, bal ninkan eega 3 Kaadh wada qaatay 3 jeerna sheegtay 3 magac.
Posted by Saacid TV on Saturday, 22 May 2021
Ugu dambeyntii doorashooyinka Somaliland ayaa wajahaya khilaaf reero ku dhisan iyada oo qaar ka mid ah dadka loogu yeero beelaha dhexe iyo kuwa darafyada ay diidan yihiin hanaanka doorashada.